၂၀၂၀ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု) - ဝီကီပီးဒီးယား
၂၀၂၀ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ဟူပေ့ခရိုင်, ဝူဟန်မြို့
140,904 (CDC confirmed)
2,405 (CDC confirmed)
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဖြစ်ပွားနေသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ၂၀၁၉ ( COVID-19 ) သည် လတ်တလော ပြင်းထန် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းရောဂါလက္ခဏာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ၂ ( SARS-CoV-2 ) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော ကူးစက်ရောဂါအသစ်တစ်ခုသည် ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလတွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ပြည်နယ်များ၌ အမေရိကန်ဆာမိုအာ မှလွဲ၍ ကိုလံဘီယာခရိုင်(ဝါရှင်တန်ဒီစီ၏ ယခင်အမည်) နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ နယ်မြေ အားလုံးတွင်ရောဂါများကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။  ၂၀၂၀ မတ်လ ၂၈ရက်အထိ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကာ ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် စုစုပေါင်းသေဆုံမှုအများဆုံးနိုင်ငံ အဆင့်(၆)တွင်ရှိ၏ ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ ပထမဆုံးသိရှိခဲ့ရသော ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ ၂၀၁၉ ဖြစ်ပွားမှုကို ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် အတည်ပြုခဲ့သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန်မြို့ မှ (၅) ရက်စောပြီးပြန်လာသောအသက် (၃၅) နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတစ်ဦးမှ တွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ အိမ်ဖြူတော် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားမှုဆိုင်ရာ အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကို ဇန်နဝါရီလ 29 ရက်နေ့တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နှစ်ရက်အကြာတွင် သမ္မတဒေါ်နယ်လ် ထရန့်က ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ် (အမေရိကန်) အား ကြေငြာခဲ့ပြီး တရုတ်ပြည်မှခရီးသွားများအတွက် ကန့်သတ်ချက်များကို ကြေငြာခဲ့သည်။  ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ "ခရီးသွားခြင်း သို့မဟုတ် ရောဂါကူးစက်ခံရသူတစ်ဦးနှင့် နီးကပ်စွာအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ခြင်းမှ တစ်ဆင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရခြင်းအား မသိရှိရသေးသူ" တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပွားမှုကို ကယ်လီဖိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဌာန (CDC) ကအတည်ပြုခဲ့သည်။ 
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် COVID-19 စမ်းသပ်ခြင်းတွင် နှေးကွေးစွာစတင်ခဲ့သည်။    ဇန်နဝါရီလမှမတ်လလယ်အထိ အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) ၏လုပ်ငန်းစဉ်များသည် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတိုင်းလိုက်နာသော ဓာတ်ခွဲခန်းများအား လူနာများထံသို့ ရောဂါအကြောင်း ထုတ်ပြန်ပေးခြင်းကို တားမြစ်ခဲ့သည်။ CDC သည် သူ့ကိုယ်ပိုင်စမ်းသပ်ကိရိယာ တီထွင်ခြင်း ဖြန့်ဝေခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အများစုကို မဖြစ်မနေမဟုတ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများ၌ ထုတ်လုပ်မှုအားနည်းချက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းမျိုးသည် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မပြောင်မလဲခြင်း ထိုစမ်းသပ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို သုံးစွဲရန် တရားမဝင်ဖြစ်စေသည်။  ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းအထိ FDA သည် အစိုးရမဟုတ်သည့် စမ်းသပ်ကိရိယာများကို ခွင့်မပြုခဲ့ဘဲ မတ်လအစောပိုင်းအထိ တင်းကျပ်သောစစ်ဆေးမှုဆိုင်ရာအရည်အသွေး ပြည့်မှီသောလမ်းညွှန်ချက်များ ရှိခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလအကုန်ပိုင်းတွင် FDA သည် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများအား စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်နှင့် စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန် ခွင့်ပြုခြင်းစတင်ခဲ့ပြီး မတ်လလယ်တွင် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများသည် ရာနှင့်ချီသောစမ်းသပ်မှုများကို တင်ပို့ခဲ့သည်။ မောင်းနှင်မှုမှတဆင့် စမ်းသပ်သည့်စခန်းများသည် အချို့သောပြည်နယ်များတွင် ပေါ်ထွန်းနေသည်။  မတ်လ ၂၅ ရက်အထိ အနည်းဆုံးစစ်ဆေးမှု ၄၁၈,၀၀၀ ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 
ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုက လူအများအပြားအား ဆေးရုံတင်ကုသမှုခံယူရန်နှင့်အခြားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို အတင်းအကျပ်စေခိုင်းနိုင်သည်ဟု CDC မှ CDC ကသတိပေးသည်။  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ ၁၉ ရက်မှစ၍ အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလာခြင်းကို ရှောင်ရှားရန် အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအား အကြံပေးသည်။  အမေရိကန်အစိုးရသည်လူ ၁၀ ဦး ကျော်အားမည်သည့်စုဆောင်းမှုကိုမဆိုတားမြစ်ခဲ့သည်။  ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မတ်လလယ်တွင် ဖက်ဒရယ်အရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီ (FEMA) က အမေရိကန်စစ်တပ်အင်ဂျင်နီယာကော်ပိုရေးရှင်း (USACE) အားငှားရမ်းထားသောဟိုတယ်များနှင့် အခြားအဆောက်အအုံများအပါအဝင် အဆောက်အအုံအသစ်များဆောက်လုပ်ရန်နှင့် ဆေးရုံများ နှင့် အထူးကြပ်မတ်ကုသမှုယူနစ် အဖြစ်အသုံးပြုရန်ပြောင်းလဲရန်ပြောကြားခဲ့သည်။   ပြည်နယ်နှင့်ဒေသန္တရတုံ့ပြန်မှု များတွင် လူထူထပ်စွာစုရုံးမှုများကို တားမြစ်ခြင်းနှင့် ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ကျောင်းများနှင့် အခြားပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပိတ်သိမ်းခြင်း၊ ကုန်စည်ပြပွဲများ ၊ စည်းဝေးကြီးများ နှင့်တေးဂီတပွဲတော်များကို ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် အားကစားပွဲများ နှင့် လိဂ်များ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ဆိုင်းငံ့ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ 
၁.၁ CDC reported U.S. totals
2020 coronavirus pandemic by United States state
U.S. state or territory[lower-roman ၁]
Casesကိုးကား အမှား - Closing </ref> missing for <ref> tag
<abbr title="<nowiki>Recoveries</nowiki>">Recov.ကိုးကား အမှား - Closing </ref> missing for <ref> tag
8274– 823 
1022– 83 
773 15 –7
421528 378 
6,197 129 33 4,518 
2,307 47 – – 
1,993 34 – – 
21456 200 
342566 271 
4,238 56 – – 
2,651 80 – – 
56 1 – 48 
175049 126 
2615– 256 
4,596 65 – – 
1,514 32 – – 
2983– 295 
3196– 313 
43952 432 
3,540 151 – – 
211 1 16 194 
1,239 15 – – 
4,955 48 – – 
5,486 132 – – 
5039252 216 
663 130650 
903 12 – – 
147 1 – 146 
1082– 106 
621 14 – 607 
2142– 212 
13,386 161 – 13,225 
2372– 235 
59,648 965 – 55,111 
1,1677– 1,117 
98 1 19 79 
20–2
1,653 29 – 1,624 
429 16 – 412 
548 13 – 535 
3,419 41 – 3,378 
12752 121 
2943– 291 
774 16 – 758 
90 1 29 60 
1,7207– 1,661 
2,808 38 – 2,701 
7192– 717 
235 12 – 223 
890 22 – 866 
4,483 200 201 3,863 
1130– 113 
1,154 17 – 1,135 
870– 87 
As of 30 March 2020 (UTC) · History of cases: United States
↑ U.S. where cases were diagnosed. Nationality and location of original infection may vary.
CDC reported U.S. totals[ပြင်ဆင်ရန်]
Cases in the United States per the CDC
Cases in the United States reported to CDC
Close contact 1,326
Under investigation 83,318
Wuhan, China 3
Cruise ship <i id="mwCHY">Diamond Princess</i> 46
Total repatriated cases
Total deaths from all US cases
This table reflects CDC-published totals, and may not include cases announced in the past 24 hours.
Coronavirus COVID-19 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ နှင့် Johns Hopkins တက္ကသိုလ်မှ သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
CoronaMapper Archived4March 2020 at the Wayback Machine.
↑ ၁.၀ ၁.၁ "First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States" (March 2020).
↑ "The Coronavirus: What Scientists Have Learned So Far"၊ The New York Times၊ March 10, 2020။ March 24, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Johns Hopkins CSSE။ Coronavirus COVID19 (2019-nCoV) (ArcGIS)။ Coronavirus COVID-19 Global Cases။ March 28, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၄.၀ ၄.၁ "Cases in U.S."။ March 28, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Saipan confirms two COVID-19 positive cases (in en) (March 28, 2020)။
↑ Coronavirus COVID-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins။
↑ Aubrey, Allison။ "Trump Declares Coronavirus A Public Health Emergency And Restricts Travel From China"၊ NPR၊ January 31, 2020။ March 18, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Smith, Darrell and Cathie Anderson။ "First U.S. coronavirus case of unknown origin confirmed in Northern California, CDC says"၊ The Sacramento Bee၊ February 26, 2020။ March 23, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Whoriskey။ "How U.S. coronavirus testing stalled: Flawed tests, red tape and resistance to using the millions of tests produced by the WHO"၊ March 16, 2020။ March 18, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Wang။ "How the CDC's Restrictive Testing Guidelines Hid the Coronavirus Epidemic"၊ March 22, 2020။ March 23, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pilkington။ "The missing six weeks: how Trump failed the biggest test of his life"၊ 2020-03-28။ 2020-03-28 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bendix (March 20, 2020)။ For more than2weeks, state labs were told they couldn't use the CDC's coronavirus tests—but the tests could have been used all along။
↑ Lee။ "America is finally testing for coronavirus in significant volumes"၊ March 21, 2020။ March 23, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Subramaniam။ Fact Check: US has done more coronavirus tests than South Korea, but not per person။
↑ CDC (March 7, 2020)။ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Summary။ CDC။ March 7, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Global Level4Health Advisory—Do Not Travel။
↑ Liptak။ "White House advises public to avoid groups of more than 10, asks people to stay away from bars and restaurants"၊ March 16, 2020။ March 18, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ichniowski။ "Rep. DeFazio: FEMA Asks Army Corps to Help Build Emergency Health Facilities"၊ March 18, 2020။ 30 March 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Srinivasan (March 23, 2020)။ Ok. It's just one clip. But it's by far the most intelligent thing I've heard any government official say in the last few months. Further increases likelihood the military will take over COVID19 response in the near future.။ March 24, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Deb။ "Sports Leagues Bar Fans and Cancel Games Amid Coronavirus Outbreak"၊ March 11, 2020။ March 12, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၂၁.၀ ၂၁.၁ Template error: argument title is required. ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; name "jhu" defined multiple times with different content
↑ "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Alabama Public Health. March 30, 2020.
↑ ၂၃.၀၀ ၂၃.၀၁ ၂၃.၀၂ ၂၃.၀၃ ၂၃.၀၄ ၂၃.၀၅ ၂၃.၀၆ ၂၃.၀၇ ၂၃.၀၈ ၂၃.၀၉ ၂၃.၁၀ ၂၃.၁၁ ၂၃.၁၂ ၂၃.၁၃ ၂၃.၁၄ ၂၃.၁၅ ၂၃.၁၆ ၂၃.၁၇ ၂၃.၁၈ ၂၃.၁၉ ၂၃.၂၀ ၂၃.၂၁ ၂၃.၂၂ ၂၃.၂၃ ၂၃.၂၄ ၂၃.၂၅ ၂၃.၂၆ ၂၃.၂၇ ၂၃.၂၈ ၂၃.၂၉ Worldometers Corona Virus United States
↑ "COVID-19: Case Counts". Alaska Department of Health and Social Services. March 28, 2020.
↑ "AZDHS | Epidemiology & Disease Control - Highlighted Infectious Disease for Arizona | COVID-19". Arizona Department of Health Services. Retrieved March 24, 2020.
↑ "Arkansas COVID-19 Update- Arkansas Department of Health". Retrieved March 28, 2020.
↑ Staff, Los Angeles Times. "California coronavirus cases: Tracking the outbreak". Los Angeles Times. Retrieved March 24, 2020.
↑ "Data". Colorado COVID-19 Updates. Retrieved March 18, 2020.
↑ "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". State of Connecticut.
↑ "Coronavirus Disease (COVID-19)". Delaware Division of Public Health. March 18, 2020.
↑ "Coronavirus Data". coronavirus.dc.gov. Retrieved March 27, 2020.
↑ "Tracking known coronavirus cases in D.C., Maryland and Virginia". Washington Post.
↑ "2019 Novel Coronavirus Response (COVID-19)". Florida Department of Health. Retrieved March 27, 2020.
↑ "Georgia Department of Public Health COVID-19 Daily Status Report". Georgia Department of Public Health. Retrieved March 18, 2020.
↑ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Guam
↑ "Disease Outbreak Control Division, State of Hawai'i, Department of Health". Retrieved March 28, 2020.
↑ "Current Situation in Hawaii". health.hawaii.gov.
↑ "Idaho Official Resources for the Novel Coronavirus (COVID-19)". Idaho Official Government Website. Retrieved March 27, 2020.
↑ "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) | IDPH". www.dph.illinois.gov.
↑ "2019 Novel Coronavirus (COVID-19)". Retrieved March 27, 2020.
↑ "Novel Coronavirus (COVID-19)". idph.iowa.gov.
↑ "Gov. Kim Reynolds Press Conference | March 19, 2020, 3:30 p.m". Iowa PBS. March 19, 2020.
↑ "COVID-19 Updates". govstatus.egov.com. Retrieved March 29, 2020.
↑ "The official Team Kentucky source for information concerning COVID-19". kycovid19.ky.gov. Retrieved March 30, 2020.
↑ "'Fairly good day in Kentucky.' 45 new coronavirus cases found Sunday. Total is 439". kentucky.com. Lexington Herald-Leader. Retrieved March 30, 2020.
↑ "Coronavirus (COVID-19) | Department of Health | State of Louisiana". ldh.la.gov. Retrieved March 27, 2020.
↑ "Novel Coronavirus 2019 (COVID-19)". Maine Center for Disease Control & Prevention: Division of Disease Surveillance. Retrieved March 27, 2020.
↑ "Coronavirus - Maryland Department of Health". coronavirus.maryland.gov. Retrieved March 17, 2020.
↑ "COVID-19 Cases, Quarantine and Monitoring". Mass.gov.
↑ "Coronavirus - Michigan Data". State of Michigan. Retrieved March 21, 2020.
↑ "UPDATE: 5,486 coronavirus cases in Michigan and 132 deaths". WLNS6News. March 29, 2020. Retrieved March 29, 2020.
↑ "Situation Update for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) – Minnesota Dept. of Health". health.state.mn.us. Retrieved March 25, 2020.
↑ "Tracking coronavirus in Minnesota". Retrieved March 24, 2020.
↑ "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". Mississippi State Department of Health. Retrieved March 17, 2020.
↑ "COVID-19 Outbreak". Missouri Department of Health and Senior Services. Retrieved March 17, 2020.
↑ "MONTANA RESPONSE: COVID-19 - Coronavirus - Global, National, and State Information Resources". Retrieved March 27, 2020.
↑ "Coronavirus COVID-19 Nebraska Cases by the Nebraska Department of Health and Human Services (DHHS)". Retrieved March 27, 2020.
↑ "COVID-19 (Coronavirus)". State of Nevada Department of Health and Human Services: Office of Analytics. Retrieved March 27, 2020.
↑ "Novel Coronavirus 2019 (COVID-19)". New Hampshire Department of Health and Human Services. Retrieved March 27, 2020.
↑ "Department of Health | Communicable Disease Service | New Jersey COVID-19 Dashboard". www.nj.gov.
↑ CDC US cases, states
↑ "County by County Breakdown of Positive Cases". Department of Health. Retrieved March 29, 2020.
↑ "Governor Cuomo COVID-19 March 29th update - 7,195 new cases across the state, death toll up to 965". WKTV News. Retrieved March 29, 2020.
↑ "COVID-19 Case Count in North Carolina" Archived 30 March 2020 at the Wayback Machine.. Retrieved March 17, 2020.
↑ "North Dakota Coronavirus Cases". North Dakota Department of Health. Retrieved March 27, 2020.
↑ "Saipan confirms two COVID-19 positive cases". Pacific Daily News. Retrieved March 28, 2020.
↑ "Ohio Department of Health". coronavirus.ohio.gov. Retrieved March 17, 2020.
↑ "COVID-19 | Oklahoma State Department of Health |". coronavirus.health.ok.gov.
↑ "Oregon Health Authority : Emerging Respiratory Infections: COVID-19 : Diseases A to Z : State of Oregon". www.oregon.gov. Retrieved March 17, 2020.
↑ "COVID-19 Cases in Pennsylvania". PA Department of Health. Retrieved March 27, 2020.
↑ "COVID-19 Disease Data". RI Department of Health. March 17, 2020.
↑ Parker, Paul Edward. "R.I. reports first coronavirus deaths". providencejournal.com. Retrieved March 28, 2020.
↑ "Testing & SC Data (COVID-19) | SCDHEC". www.scdhec.gov.
↑ "NOVEL CORONAVIRUS (COVID-19) UPDATES AND INFORMATION". South Dakota Department of Health. Retrieved March 12, 2020.
↑ "Coronavirus Disease (COVID-19)". Tennessee Department of Health. March 22, 2020. Retrieved March 27, 2020.
↑ "COVID-19 in Texas (Dashboard)". Texas DSHS. March 25, 2020. Retrieved March 25, 2020.
↑ "First Case of Coronavirus Confirmed in U.S. Virgin Islands". viconsortium.com.
↑ "Latest Information". Retrieved March 17, 2020.
↑ "2019 Novel Coronavirus". Vermont Department of Health. Retrieved March 17, 2020.
↑ "CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)". Virginia Department of Health. Retrieved March 17, 2020. Note: This isarolling update. This source is updated every day & as the situation develops.
↑ "2019 Novel Coronavirus Outbreak (COVID-19)". Washington Department of Health. Retrieved March 15, 2020.
↑ "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)". West Virginia Department of Health & Human Resources. Retrieved March 27, 2020.
↑ "2019 Novel Coronavirus Outbreak (COVID-19)". Wisconsin Department of Health Services. Retrieved March 27, 2020.
↑ Cases in the US။ Centers for Disease Control and Prevention။ March 20, 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
CDC: Coronavirus 2019 (COVID-19) ၊ အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစင်တာများ (CDC)
CDC - အမေရိကန်အမှုတွဲမြေပုံ
CDC: Coronavirus ရောဂါ 2019 (COVID-19) သတင်းစင်တာ
CDC - ပြည်နယ်နှင့်နယ်မြေကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာနလမ်းညွှန်
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်သူ့ရေးရာဌာန CDPH ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန (CDPH) မှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ
The New York Times - အမေရိကန်ရှိ Coronavirus Case များအားလုံးကိုခြေရာခံခြင်း - မြေပုံအပြည့်
တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ Coronavirus Self- Assessment Tool
Coronavirus ဖြစ်ပွားမှုအပေါ်အစိုးရနှင့်အခြားတုံ့ပြန်မှုများကို C-SPAN ကဖော်ပြသည်
Coronavirus (COVID-19) - သတင်းအရင်းအမြစ်နှင့်အမေရိကန်အစိုးရ၏တုံ့ပြန်မှု
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၀၂၀_ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်_ကပ်ရောဂါဖြစ်ပွားမှု_(အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)&oldid=658117" မှ ရယူရန်
မတ်လ ၂၀၂၀ ရက်စွဲအတွင်း အလားအလာရှိသောထုတ်ပြန်ချက်များ
၂၀၂၀ ခုနှစ် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစပ်ရောဂါ (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၂၀:၁၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။